China OEM 3D Eyelashes Mink Lashes Yakagadzirwa nemaoko Makeup Yakazara Strip Lashes fekitori uye vagadziri | Weiti
OEM 3D Eyelashes Mink Lashes Yakagadzirwa nemaoko Makeup Yakazara Strip Lashes
1, DOLORES maitiro echisikigo maronda
2, 14mm 100% chaiyo mink bvudzi
3, Yakasarudzika yakavanzika chitambi marasha ekuputira bhokisi
4, Yakakura yakagadzirira stock uye ngarava nenguva
1, Natural Akayambuka Masumbu & Akawanda akaturikidzana:Imwe yeedu mink eyelashes anoitwa nemaoko. Iyo ine yakasarudzika yakaturikwa mhedzisiro, yakajeka yakajeka uye inopenya. Inogona kutemerwa pamipendero, gadzira yakanaka makeup. Inokodzera kupfeka kwemazuva ese, mutambo wemifananidzo kupfura.
2, Premium Hutsinye-husina Mink Fur:Eyelash yedu ndeyeUtsinye-isina, iyo inogadzirwa neSiberian mink fur, ichibva kumiswe yemisodzi yekugadzira yekuzadza minks 'bvudzi rinowira. Ipapo yakashambidzwa uye kupendwa vasati vaiswa mukati. Zvichakadaro, bvisa mink lashes inonzwa kugadzikana kupfuura synthetic lashes. Natural yakapfava, yakakombama, hypoallergenic, senge yemunhu maronda, uye hapana anogumbura kumeso ako.
3, Ruoko Rwakagadzirwa Nyoro Kotoni Bhendi:Mutsvuku mutete mutsetse mutsara unoita kuti maziso ako aite senge ane eyeliner mhedzisiro, yakanyanya kunaka uye inofadza. Inogona kushandiswazve kanopfuura makumi maviri neshanu nguva nekuchengetwa kwakakodzera. Hazvisi nyore kudonha neyakagwinya marara.
4, Chiedza Kurema- Hapana Kunzwa:Imwe neimwe mink eyelashes uremu inongova 0,5 magiramu. Hurema "0" mitoro, hapana inorema kunzwa. Saka iwe haugone kunzwa huremu hwayo, kana iwe uchinge wakapfeka. Panguva imwecheteyo, zvakachengeteka uye zvine hushamwari kumeso asinganzwisisike kana wekubata lens anotakura.
Pashure: Kupisa Kutengesa 3D Mink Eyelashes Wholesale 100% Chaiyo Siberian Mink Lashes
Zvadaro: Factory Bulk Mink Eyelashes Vendor 3D Lashes neyakavanzika Label Eyelashes Bhokisi
Mink Yenhema Eyelash
Yakazara Strip Lashes
Bulk Ziso Lashes Isina Mvura Reusable Classic 3d ...
Wholesale Private Label 100% Zvakaitwa nemaoko Utsinye F ...
Fluffy Wholesale 3D Strip Mink Eyelash Kugadzira ...
Bulk Nyore Kunyorera Yakazara Strip 3d 5d 100% Mink L ...
mink lashes, Eyelash Kuwedzeredzwa, eyeliner, Ziso Lashes, lipgloss, Vatengesi ve Eyelash,